ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ခြောက်ခြားဖွယ်ရာအသံ
ညီမ လေး ရေ စိတ် ချမ်း သာ ပါ စေ--
ဟုတ်တယ် ... ဖုန်းပိတ်ပြီး တစ်ပါတ် လောက် နေကြည့်လိုက် ... တော်တော် ငြိမ်းချမ်း တယ် ...
ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဒုက္ခတွေကနဲ့ အမြန်ဆုံးကင်းဝေး နိုင်ပါစေ ညီမရေ :)
ညီမလေးရေ...ဘဝလက်တွဲဖော်လာချောင်းရင်းနဲ့ မမျှော်လင့်ပဲ ဒီpostလေးဖတ်မိသွားတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ဒီထက်ဆိုးတဲ့ ချူပ်ချယ်မှူတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖူးတယ်။ လင်းလက်အရွယ်တုန်းက အိမ်ကလိုက်မပို့ပဲ ဘယ်မှမသွားခဲ့ရဘူး။ သူများတွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်တာတွေ့ရင် သိပ်အားကျခဲ့တာ။ ဝတ္ထုမဖတ်ရဘူး၊ အဝတ်အစားကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူး၊ ယောင်္ကျားလေးသူငယ်ချင်းမထားရဘူး။ အဲဒီတုန်းက တို့မှာblogတခုရှိရင် ပေါက်ကွဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ တကယ်တော့ မိဘတိုင်းက သားသမီးတိုင်းကို အကြွင်းမဲ့ချစ်ကြပါတယ်။ ချစ်ပုံခြင်းကွာကြလို့ပါ။ ချစ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ပူပင်မှူသောကတွေကြောင့် ချူပ်ချယ်ခြင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။ အချိန်အတိုင်းတာ တခုထိပေါ့ညီမရယ်။ နားလည်မှူတွေရလာတဲ့အခါ အရာအားလုံး ပြေလည်သွားမှာပါ။ ဖြစ်နေတဲ့ဘဝမှာ စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်ဖို့ ကြိုးစားနော်(ပြောတော့လွယ်တယ်နော်)။ ငြိမ်းချမ်းပါစေ။
အားလုံးကျေးဇူးပါ။ ကျွန်မ ဒယ်ဒီနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေအားလုံး တစ်နေ့အဆင်ပြေသွားဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်။ မကြားချင်တဲ့ဖုန်းသံအချို့အတွက်လည်း တစ်ခါတစ်လေတော့ ဖုန်းပိတ်ပြီး နေလိုက်ကြတာပေါ့ :)
May Phuu said...
I understand this feeling ! when i lived with my family ,my mother called me every 15 mins asking me where I am. :(